Blog » Google yakabhadharisa rekodhi yemabhiriyoni 2,42 eEU neEU. Uku kunongova kutanga, dzimwe mhosva mbiri dzinogona kupihwa
European Commission inoti Google yakashandisa zvigadzirwa zvayo zveGoogle kutenga mumhedzisiro yeinjini yekutsvaga yeGoogle kukuvadza vamwe vanopa zvinhu. Zvinongedzo zvezvigadzirwa zveGoogle zvekutenga zvaive uye zviri pamusoro pepeji yemhedzisiro yekutsvaga, nepo nzvimbo dzekukwikwidza masevhisi sekumisikidzwa neGoogle yekutsvagisa algorithms dzinoonekwa chete pazasi nzvimbo.
Mukati memazuva makumi mapfumbamwe Google ichafanirwa kushandura yayo yekutsvagisa algorithm masisitimu ehurongwa. Zvikasadaro, chirango chichaiswa kusvika pa90% yeavhareji yekutengesa kwezuva nezuva kweAlfabhethi, kambani yemubereki weGoogle.
Verenga zvimwe: https://rechtennieuws.nl/54679/commissie-legt-google-geldboete-op-242-miljard-eur-misbruik-machtspositie-als-zoekmachine-eigen-prijsvergelijkingsdienst-illegaal-bevoordelen
Previous Post European Commission inoda kuti varevereri vavazivise nezvekuvakwa…